September 14, 2018 – सप्तरंगी एफ एम
सप्तरंगी एफएम /२९ भदौ २०७५ नेपालमा बाँकी रहेका भूटानी शरणार्थीहरुको जिवन सुधारका लागि जिविकोपार्जन सम्बन्धी कार्याक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । लामो समय देखि भूटानी शरणार्थी रेखदेखमा कार्य गर्दै आएको लुथरन विश्व फेडरेशनका महासचीव डा. मार्टिन जंगले आज सो कुरा बताउनु भएको हो । भूटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीको अवलोकन गर्दै आज महासचिव डा. जंगले शरणार्थीहरुले चाहाना गरे आफूहरुले अझै पनि ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/२९ भदौ २०७५ नेपाल प्रेस यूनियन माइपश्चिम क्षेत्रीय समिति दमकले नेपाल–अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) का अध्यक्ष सुदीपराज पन्तलाई सम्मान गरेको छ । यूनियनले आज दमकमा एक कार्यक्रमकाबीच अध्यक्ष पन्तलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको हो । पन्तलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र थापाले सम्मान पत्रले सम्मानित गर्नु भयो । दमक निवासी पन्त अमेरिका गएर पनि नेपाली पत्रकारिताको ...